Rough Carpenters Job Description / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Rough Carpenters Job Description / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
Rough Carpenters Job Description / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized6မှတ်ချက်များ 995 views
Assemble abrasive wooden houses, for example sewage sustains, or cement varieties, ငြမ်း, canal, ဆက်, billboard indications, and momentary body housing, according-to blueprints, ပုံရိပ်တွေ, or verbal guidance.
Slice or saw planks, woodwork unit, သို့မဟုတ်သစ်သား, or plyboard to required dimensions, utilizing handsaw, energy noticed.
Construct and fasten materials jointly to construct wood or metal construction of framework, using products, လက်သည်း, or fasteners.
Anchor and splint varieties and also other structures in position, using screws, လက်သည်း, point rods, metal wires, planks, ပြင်ဆင်ပြီးသုံး, သစ်သား.
Construct kinds roof sustains, တငျမွှောကျ, ငြမ်း, or chutes, employing plumb principle, handtools, and levels.
Examine sustains and architectural wood to recognize rot, and exchange timbers as required, လက် tools တွေသုံးပြီး, almonds, and bolts.
Active-Listening-Offering whole attention to what other people are currently saying, getting time and energy to comprehend the things being made, စံပြအဖြစ်မေးမြန်းကိစ္စများ, အစားမှားကြောင်းသာဓကမှာ mesmerizing ထက်.
Critical-Thinking-Utilizing judgement and thought to identify weaknesses and the talents of approaches, ကိစ္စများမှတွေ့ရှိချက်သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာကုစား.
Tracking-MonitoringANDExamining performance of yourself, အခြားအဖြစ်ကြောင်းကိုလူတွေ, သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းတိုးမြှင့်မှုများ generate သို့မဟုတ်ကုစားအရေးယူစဉ်းစားရန်.
installation-Installing ဝါယာကြိုး, devices များ, devices များ, သတ်မှတ်ချက်များကျေနပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
ခြေရာခံခြင်းသည်-လေ့လာခြင်းဘူးသီးစစ်ဆင်ရေး, ညွှန်ကိန်းများ, or additional indicators to make sure there isadevice working appropriately.
Quality-Control Analysis-Executing examinations and exams of products, ဖြေရှင်းနည်းများ, ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
Analysis-Identifying what sort of method must function and the way improvements in situations, လုပျထုံးလုပျနညျး, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအကျိုးခံစားခွင့်ကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်.
Operations of Savings-Deciding how income will be used to obtain the work done, ဤဥပဒေကြမ်းများများအတွက်စာရင်းကိုင်.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-အားပေးမှုအုပ်ချုပ်ရေး, ထူထောင်, သူတို့အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုဦးဆောင်, အဆိုပါကျူးကျော်များအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်.
high-School တွင်ဒီပလိုမာ (GED သို့မဟုတ်မြင့်မားသော-School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
ထက်ပိုပြီး2နှစ်ပေါင်း, ရန်-Up နှင့်အပါအဝင်4နှစ်ပေါင်း
အောင်မြင်မှုများ / ကြိုးပမ်းမှု – 91.15%
ဇွဲ – 89.88%
စီမံကိန်း – 90.40%
ထိန်းချုပ်ရေး – 88.53%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 91.04%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – 86.44%
ယဉ်ကျေးမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 86.22%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 89.84%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 89.47%
တည်ငြိမ်ခြင်း – 91.80%
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – 91.31%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 89.02%
လွတ်လပ်ခြင်း – 84.44%
တီထွင်ဖန်တီးမှု – 85.68%
စဉ်းစား – 82.94%
မေ 2, 2019 တွင် 1:05 နံနက်
Pingback: How To Wear For Work – နားလည်မှု | OKC Timebank
Pingback: Online Dating Safety Rules For Women-4 Ways Preserve Yourself| | မွေပွငျအောကျလမျး